GX12/ GX30 အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်း အောင်မြင်သည် မအောင်မြင်သည်ကို ကျွန်ုပ်အား အသိပေးမည်လား?
ဟုတ်ကဲ့။ သင့်လျှောက်ထားမှု အခြေအနေကို SMS ဖြင့် အသိပေးပါမည်။
GX12/ GX30 အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူရန် မအောင်မြင်ပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း?
သင့်အကောင့်တွင် ငွေလက်ကျန် မလုံလောက်ပါက သို့မဟုတ် အကောင့်သက်တမ်းကုန်နေပါက အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူရန်လျှောက်ထားမှု မအောင်မြင်ပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင် အသစ်ပြန်ယူရန် တစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားပါမည်။
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ပါသလား?
UMB တွင် *118*1*5# ဟု ပို့ပြီး အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို ရပ်နိုင်ပါသည်။
အကောင့်သက်တမ်းကုန်နေစဉ် GX12/ GX30 ကို လျှောက်နိုင်ပါသလား?
မရပါ၊ အကောင့် သက်တမ်းကုန်နေစဉ် GX12/ GX30 ကို မလျှောက်နိုင်ပါ။
GX12/ GX30 ကို အကောင့် သက်တမ်းကုန်ကာလတွင် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူမည်လား?
မရပါ၊ အကောင့် သက်တမ်းကုန်နေစဉ် GX12/ GX30 ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မယူနိုင်ပါ။
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်း မအောင်မြင်ဘဲ ဒုတိယအကြိမ်တွင်မှ အောင်မြင်ပါက မသုံးရသေးသော ဟော့စပေါ့ကိုယ်တာ လက်ကျန်အတွက် ဘာဖြစ်မည်နည်း?
ပမထမအကြိမ် အသစ်ပြန်ယူခြင်း မအောင်မြင်ပါက ဒုတိယအကြိမ်တွင် အောင်မြင်သည့်တိုင်အောင် မသုံးဘဲ ကျန်နေသော ဟော့စပေါ့ ဒေတာများကို ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်မဖြည့်ပေးပါ။
အသစ်ပြန်ယူခြင်း ဒုတိယအကြိမ် ကြိုးစားမှု မအောင်မြင်ပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း (ဝန်ဆောင်မှုများကို အသစ်ပြန်ယူရန်)?
သင့်လျှောက်ထားမှုကို အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး မသုံးရသေးသော ဟော့စပေါ့ လက်ကျန်များကို ဖယ်ရှားပါမည်။
GX12/ GX30 ကို အသစ်စသုံးနိုင်သည့် အကြိမ်ရေ ကန့်သတ်ချက် ရှိပါသလား?
မရှိပါ၊ စတင်သုံးရန် အကြိမ်ရေကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။
လစဉ်ကိုယ်တာအပြင် နောက်ထပ် ဟော့စပေါ့ကိုယ်တာ မည်သို့ ရယူနိုင်သနည်း?
Hotspot Booster ကို လျှောက်ထားပါက 3GB ရပြီး မြန်နှုန်းအကန့်အသတ် မရှိဖြင့်3ရက် သုံးနိုင်ကာ RM3 မျှသာ ကုန်ကျပါသည်။ ယခု အပိုထပ်ဆောင်းသည် GX12/ GX30 အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာအတွက် မြန်နှုန်းကို မြှင့်နိုင်ပါသလား?
ရပါတယ်။ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာအတွက် မြန်နှုန်းမြှင့်ရန် (ဗီဒီယိုနှင့် သီချင်း အွန်လိုင်း ကြည့်ရှုခြင်း အပါအဝင်) Turbo Booster ကို လျှောက်ထားပါက RM5 မျှသာ ကုန်ကျပြီး 24 နာရီ သက်တမ်းရှိပါသည်။ ယခု အပိုထပ်ဆောင်းသည် GX12/ GX30 အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။